I-Little Brook-Cabin ecocekileyo
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguLucy
I-Little Brook inokuba ncinci kodwa inayo yonke into oyifunayo. Ixhotyiswe kumgangatho ophakamileyo, izimele kunye neshawari yabucala kunye neWC. Ukupaka ngaphandle kwendlela yokupaka ngokuthe ngqo ngaphandle kuthetha ukuba ungahlala ngqo kwaye uyonwabele ilali yaseCornish.
Kukho ibhedi elingana nenkosi kunye nenye ekhoyo. I-single yi-daybed eya kwenziwa njengesofa ngaphandle kokuba kucelwe ngenye indlela.
Ngeketile, ithowusta ekwikhabhathi kunye nekhitshi elisebaleni ifriji encinci, imicrowave, isitovu soveliso kunye nesitovu segesi sokuhlala ungazenzela esakho isidlo sakusasa. Sebenzisa amaqanda anikezwe ziinkukhu zethu ezonwabileyo, iisiriyeli, ibrioche & jam.
Ukuba ukhetha kukho indawo yokupheka ngaphandle, yiza ne-BBQ yakho okanye amalahle ukuze uyisebenzise kunye ne-BBQ encinci oyinikiweyo.
Ibhaso eliphumelele ibhaso leSpringer Spaniel Pub likumgama nje oyimayile enye kunye neembono ezimangalisayo kwintlambo ekuhambeni kwakho ubuya.
Ivenkile yasefama esandula ukuvulwa iTre, iPol, iPen ikwakufuphi necafe ebalaseleyo, iibhula kunye nemveliso yasekhaya entle kwaye inokukunika isidlo sakusasa esipheleleyo kunye nekofu enkulu.
4.95 · Izimvo eziyi-198
IBeals Mill yindawo ethe cwaka yasemaphandleni emi kumda weCornwall/Devon iyenza isiseko esihle sokuhlola omabini la mazwe. Lo mmandla utyebile kwiipropati zeNational Trust kunye neegadi zabucala. Kukwakho nentaphane yeelwandle kumanxweme asemantla nakumazantsi onokukhetha kuzo, iindawo ezintle zonxweme kunye namaphandle.
Kukho ivenkile yaselalini kumgama nje oziikhilomitha ezi-1.5 apho isitokhwe sezona zinto zibalulekileyo kwaye eyona venkile ikufutshane kukumgama omfutshane weekhilomitha ezi-6.
Siyafumaneka ukuze siphendule imibuzo yeendwendwe kunye noncedo apho kuyimfuneko.